Global Voices teny Malagasy · 2 Desambra 2008
02 Desambra 2008
Tantara tamin'ny 02 Desambra 2008
Amerika Latina02 Desambra 2008
"Noraisin'ny vehivavy tany Amerika afovoany an-tanana ny haitao"tamin'ny alalan'ny famahanam-bolongana miresaka ny fampandrosoana ny rindrambaiko, ny haitaon'ny fampahafantarana sy ny fifandrasaina (TIC) vaovao, ny fampidirana ny TIC ho anisan'ny fampiasa andavanandro. Fa ny mampiavaka azy dia ny adihevitra lehibe amin'ny famahanam-bolongana tamin'ny famoronana tambajotra ho an'ny hafa.
Korea Avaratra02 Desambra 2008
Sarotra ny mahazo vaovao avy any Korea avaratra. Raha misy ny olona liana amin'io tanàna io dia tsy maintsy any amin'ny bolongana na dinika napetrak'ireo nitsidika farany io firenena io no todihiny ahafahany mihevitra momba ny toe-javamisy farany any amin'io firenena io. Hitsidika ny tanànan'i Kaesong isika amin'ity lahatsoratra ity,...
Borkina Faso02 Desambra 2008